Etu esi lelee ihe nkiri kacha mma nke Goya Awards 2020 | Akụkọ akụrụngwa
Anyị esorola na njedebe nke onyinye Goya 2020, emume a na-eme ebe ihe nkiri sịnịma Spanish kwa afọ na nke na-akwụghachi ndị ọrụ niile ụgwọ ọrụ n'ihu na n'azụ ese foto eserese ahụ. Agbanyeghị, ịnwere ike ịnweghị ike ịnụ ụtọ ihe nkiri ma ọ bụ ihe nkiri niile na - emeri mmeri, mana echegbula onwe gị, n'ihi na Actualidad Gadget ọzọ bụ ebe a iji nweta gị obi ọkụ si n'ọkụ ka ị wee nwee ike ịkparịta ụka n'ọfịs ihe ngosi ohuru ohuru nke ihe nkiri Spanish. Anyị na-ewetara gị ndu na nnukwu ndị mmeri nke onyinye Goya 2020 na otu esi ekiri ihe nkiri ha n'ịntanetị.
1 Ihe nkiri kacha mma: Mgbu na ebube
2 Onye Nlekọta Kachasị Mma: Mgbe Agha Na-aga
3 Nwanyị na-akwado nkwado kacha mma: Na-enweghị njedebe
4 Ihe nkiri ndị ọzọ ị nwere ike ịlele na ntanetị
5 Ndepụta nke ndị mmeri na Goya 2020 Awards:
Ihe nkiri kacha mma: Mgbu na ebube
Ihe nkiri onye Pedro Almodóvar duziri ma nke ahụ enweela kpakpando nke kpakpando Hollywood Antonio Banderas o nweela nghọta ọzọ, n'eziokwu ọ merie Goya maka onye nduzi kachasị mma (Pedro Almodóvar); Onye na-eme ihe nkiri kachasị mma (Antonio Banderas); Onye na-akwado ihe nkwado kachasị mma (Julieta Serrano); Ihe ngosi kacha mma (Pedro Almodóvar); Nhazi kachasị mma (Teresa Font) na egwu egwu kachasị mma, ọ dịghị ihe ọzọ na ihe ọbụla maka ezigbo ihe nkiri nke Goya 2020 Awards, ọ bụghị maka ọtụtụ ndị na-ese ihe gbara ya gburugburu.
JIKERE iji lelee ịntanetị Mgbu na ebube.
Emepụtara fim ahụ na Machị 2020 na ugbu a dị ugbu a na nyiwe nyiwe dịka Netflix, ọ bụ ezie na enwere ike ịgbaziri ya na nyiwe ndị ọzọ dịka Filmin, Vodafone TV, Rakuten TV, Google Play na ọbụna Apple iTunes. Agbanyeghị, ụfọdụ cinemas ka na-egosi ya ma ọ bụ ga-egosi ya ọzọ maka mmeri ndị a rụzuru. Ahụhụ na otuto gbasara Salvador Mallo, onye nduzi ihe nkiri na obere awa ọ na-enyocha ndụ ya kemgbe afọ 60, ị ga-atụfu ihe nkiri ahụ onye ọ bụla na-ekwu maka ya? Ekwenyesiri m ike na ọ bụghị.
Onye Nlekọta Kachasị Mma: Mgbe Agha Na-aga
Ihe nkiri nke Alejandro Amenábar enweela ọnọdụ ya na Goya 2020 Awards, Edere ya dị ka otu n'ime ndị a họpụtara ahọpụta, ma n'eziokwu, o nwetawo ụfọdụ onyinye: Onye na-akwado ihe nkiri kachasị mma (Eduard Fernández); Ntuziaka mmepụta kacha mma (Carla Pérez de Albéniz); Ntuziaka nka kacha mma (Juan Pedro de Gaspar); Ekike kachasị mma (Sonia Grande) na ihe kachasị mma na edozi isi. Obi abụọ adịghị ya, ihe nkiri ndị ọzọ enyere onyinye na nke kachasị aha ha agaghị efu na ntuziaka anyị iji hụ fim kacha mma nke Goya Awards 2020.
JIKERE iji lelee ịntanetị Mgbe Agha ahụ Na-adịgide.
Mgbe agha na-adịgide ọ bụ ọhụụ nke agha obodo Spanish site na echiche nke ọmarịcha Míguel de Unamuno. Karịsịa, ọ na-elekwasị anya n'otú onye edemede si nọrọ na mkpebi nke abụọ na otu na otu ọha mmadụ Spanish n'oge ahụ kewara nke ukwuu. Enwere ike ịnweta ihe nkiri na Movistar + site na taa, ma na gụgharia na nlọghachi nke a na-eme kwa izu site na ọwa sinima ya. Kedu ụzọ ọ bụla, ihe nkiri a ka dị n'ọtụtụ ebe nkiri sinima na mba ahụ.
Nwanyị na-akwado nkwado kacha mma: Na-enweghị njedebe
Onweghi ihe ọzọ ma n’abụghị ihe nhọpụta iri na ise Ugwu a na-enweghị njedebe, mechie ihe ndị a: Onye Nduzi Kachasị Mma (Belén Cuesta) na ụda kacha mma. O siri ike ịlụ ọgụ megide abụọ ndị gara aga. N'okwu a, ọrụ nke Aitor Arregi, Jon Garaño na José Mari Goneaga enweela nnabata dị mkpa n'agbanyeghị na enwetaghị ọtụtụ onyinye, ọ dịkwa ka ọgụ David megide Golayat. Ọzọkwa ihe nkiri a lekwasịrị anya na nkata nke Spanish Civil War nke yiri ka ọ bụ ihe ejiji.
Ọ na-ekwu maka otu di na nwunye zoro ezo kemgbe ihe karịrị afọ iri atọ n'ihi ụjọ ha nwere ike imegwara nke ndị meriri nwere ike iwere ha mgbe agha ahụ gasịrị. Anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ihe nkiri a na Netflix katalọgụ site na February 28, N'otu aka ahụ a ga-akwụ ụgwọ ya na Filmin site na Machị 11 na-esote. Ka ọ dị ugbu a, anyị enweghị nhọrọ ọ bụla ma ọ bụghị ịga ụlọ ihe nkiri ma ọ bụrụ na anyị chọrọ inwe ike ikwu maka ya.
Ihe nkiri ndị ọzọ ị nwere ike ịlele na ntanetị
Ihe na-ere ọkụ: Ọ dị na Filmin site na February 14.
N'èzí: Naanị dị na ụlọ ihe nkiri n'oge ahụ.
Klaus: Dị na Netflix.
Buñuel na labyrinth nke turtles: Odikwa na Movistar + na Apple iTunes.
Ndepụta nke ndị mmeri na Goya 2020 Awards:
Ntuziaka kachasị mma: Mgbu na ebube
Uzo ohuru kacha mma: nwa nwanyi onye ohi
Onye na-eme ihe nkiri kachasị mma: Antonio Banderas maka mgbu na ebube
Onye na-eme ihe nkiri kacha mma: Belén Cuesta maka La tinchera infinita
Onye na-akwado ihe nkiri kachasị mma: Eduard Fernández maka Ọ bụ ezie na agha ahụ na-adịgide
Nwanyị na-akwado nkwado kachasị mma: Julieta Serrano maka ihe mgbu na ebube
Onye na-eme ihe nkiri ohuru kacha mma: Enric Auquer maka Onye Na-egbu Iron
Nwanyị ọhụrụ kachasị mma: Benedicta Sánchez for Lo que arde
Ihe ngosi kacha mma: Pedro Almodóvar maka ihe mgbu na ebube
Ihe ngosi kacha mma: Daniel Remón na Pablo Remón, maka Weathering
Ihe nkiri kacha mma emere: Buñuel na Labyrinth nke Turtles
Ihe nkiri kacha mma edere: Ara Malikian: Ndụ dị n'etiti eriri
Ihe nkiri Europe kacha mma: Les Miserables (France)
Ihe nkiri Ibero-America kacha mma: Odyssey nke Giles (Argentina)
Onye nduzi kachasị mma nke foto: Mauro Herce for Lo que arde
Ntuziaka kachasị mma: Carla Pérez de Albéniz maka Ọ bụ ezie na agha ahụ na-adịgide
Ntughari kacha mma: Teresa Font maka mgbu na ebube
Ntuziaka nka kacha mma: Juan Pedro de Gaspar maka Ọ bụ ezie na agha ahụ na-adịgide
Uwe ejiji kacha mma: Sonia Grande maka mgbe agha ahụ na-aga
Ihe kacha mma mma na ntutu isi: agha na-adakwa
Da Kachasị Mma: Na-enweghị njedebe
Mmetụta Pụrụ Iche Kachasị Mma: Oghere
Egwu mbu kacha mma: Mgbu na ebube
Egwu mbu kacha mma: Javier Rubial maka Intemperie
Akụkọ Ifo Kachasị Mma: Sus de Síndria
Akwụkwọ kacha mma kacha mma: Ndụ anyị dị ka ụmụaka gbara ọsọ ndụ na Europe
Ihe nkiri kacha mma kacha mma: Madrid 2120
Goya nke Honor Award: Pepa Flores (Marisol)
Anyị nwere olile anya na ntuziaka a enyerela gị aka ịnụ ụtọ ọdịnaya niile dị n'ịntanetị iji hụ ihe nkiri kacha mma nke Onyinye Goya 2020.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Ihe nkiri na usoro » Etu esi lelee ihe nkiri kacha mma nke Goya Awards 2020
Soro ọganihu Coronavirus gburugburu ụwa n'oge